indawo yokuhlala eqhelekileyo intaba umgamo welitye ukusuka embindini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLuigina
Intle kwaye yamkelekile indawo enamagumbi amabini abantu abayi-2/4 kumgama olingana nelitye ukusuka embindini.
Imiqadi eveziweyo, indawo yomlilo yamatye, i-pastel shades yeendonga, iinkcukacha ezincinci zesitayela se-chalet ziya kukugubungela ngokufudumala kwazo kukwenza uzive usekhaya kwangoko.
Ukusuka kwiifestile ezinkulu zegumbi lokuhlala, unokubukela i-panorama entle kakhulu etshayela ukusuka emantla ukuya emazantsi. Ngentwasahlobo, ehlotyeni, unokufumana isidlo sasemini okanye ujabulele ukuphumla okuncinci kwibalcony ebanzi kakhulu phambi kweentaba zethu ezithandekayo.
Indawo yokuhlala ibandakanya:
- igumbi lokuhlala eliqaqambileyo nelamkelekileyo elinebhedi yesofa (i-18 cm umatrasi) kunye neziko, ikhitshi elivulekileyo elinesitovu segesi EZIxhotyiselwe ukupheka, ifriji encinci enefriji, i-oven yendabuko kunye ne-microwave;
-Igumbi lokulala elinothando ngombala we-pastel kunye neebhedi ezimbini kunye neewadi zesiqhelo;
-igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa kunye neshawa, umatshini wokuhlamba kunye nomzila wetawuli oshushu;
- i-mezzanine enokusetyenziswa njengendawo yokugcina ifikeleleke ngeleli;
-ibalcony ebanzi kakhulu emile okwe-L
-i-cellar yokugcina i-ski / indawo yokuhlala yezixhobo zemidlalo
-indawo yokupaka iimoto
Indawo yokuhlala inokuhlala ukuya kuthi ga kwi-4 abantu (igumbi eli-1 lokulala + ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala). Ukuhlala ixesha elide, inani elicetyiswayo leendwendwe yi-2.
Yonke into oyifunayo ngokuhlala okufutshane kunye nexesha elide ifakiwe. Ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe.
Ngesicelo, sibonelela: ibhedi enamashiti, isitulo esiphakamileyo, isitulo esongezelelekileyo, iincwadi, imidlalo kunye neeDVD zabantwana kunye noBACKPACK WABANTWANA.
Indawo yokuhlala ibekwe e-Chaloz, isithili esinophawu kunye nesizolileyo saseValtournenche, kwindawo ephakamileyo ngokubhekisele kumbindi welizwe. Ngemizuzu nje emibini ngeenyawo, ecaleni kwendlela emfutshane ecebisayo phakathi kwezindlu zembali, ufikelela kumbindi wedolophu apho kukho iibhari ezininzi kunye neeresityu.
Umbuki zindwendwe ngu- Luigina
io e mio marito conosciamo da molti anni ormai questa splendida valle di cui ci siamo innamorati al punto di trasferirci definitivamente. Mio marito insegna da oltre 10 anni musica a Valtournenche e Cervinia ed io lavoro come impiegata. Siamo entrambi appassionati di sport sia estivi che invernali.
io e mio marito conosciamo da molti anni ormai questa splendida valle di cui ci siamo innamorati al punto di trasferirci definitivamente. Mio marito insegna da oltre 10 anni musica…
Sihlala kwibala kwaye singabathandi beNtlambo. Sifumaneka kuyo nayiphi na imfuno okanye ulwazi. Ukuba ixesha liyavuma, kwaye ukuba uyathanda, siya kukuvuyela ukukumema xa ufika kwikofu okanye i-aperitif kwenye yeebhari edolophini. Ngale ndlela siya kuba nakho ukukubonisa izinto zendlu ngendlela engekho sikweni kwaye sabelane ngokuthanda kwethu i-Valde kunye nawe, sikunika ulwazi oluluncedo kunye neengcebiso malunga nendlela yokuchitha ixesha lakho eValtournenche.
Sihlala kwibala kwaye singabathandi beNtlambo. Sifumaneka kuyo nayiphi na imfuno okanye ulwazi. Ukuba ixesha liyavuma, kwaye ukuba uyathanda, siya kukuvuyela ukukumema xa ufika kwi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Valtournenche